ILavender Manor. Imizuzu ukusuka eLwandle! - I-Airbnb
ILavender Manor. Imizuzu ukusuka eLwandle!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLori
ULori ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Imi kunxweme olusempuma lwe-NB, idume ngolwandle olushushu olunesanti, eli khaya lihle linabo bonke ubutofotofo, linombono wamabala olwandle kunye nelavender. Misa kwiihektare ezili-100 kunye nemizuzu emi-2 kuphela yokuqhuba ukuya elunxwemeni, kuninzi ukuhamba, ukuhamba ngebhayisekile kunye neendlela zokuhamba ekhephuni zonke ezinxibelelana kwiindlela ezilungiswe zemoto yekhephu.
Ifanelekile kwiiholide zasehlotyeni, ukubaleka ngempelaveki, iminyhadala ekhethekileyo, ukuhamba ngekhephu okanye uhambo ngebhayisekile. Fumana ubumfihlo kunye nokuzola ngelixa ukonwabela intuthuzelo kunye nokuba kufutshane neendawo ezininzi.
Uyakuchukunyiswa ngoko nangoko ngumbono ovulekileyo novulekileyo womgangatho wokuqala ... ulungele ukuhlanganisana kunye nokonwabisa. Ikhitshi elikhulu elinezixhobo ezifanelekileyo kunye neJenn Air Range kufuneka ikholise nawuphi na umpheki. Ngexesha lonyaka, imifuno entsha kunye neeblueberries ziyafumaneka ngaphandle komnyango wakho! Igumbi lelanga kunye nedesika edityanisiweyo ikulungele ukonwabela isiselo kunye nokuthatha imbonakalo entle yamanzi, i-lavender, ukuphuma kwelanga kunye nesibhakabhaka esizaliswe ziinkwenkwezi. Igumbi lokuhlala eliqhelekileyo elinendawo yomlilo yepropane lilungile kumabonwakude, ukufunda okanye imidlalo. Ifakwe kakuhle, indlu ineeBdrms ezi-4 ezineebhafu ezi-2 1/2. Kwabo banengxaki yezinyuko, igumbi lokulala eliphambili libekwe kumgangatho omkhulu kunye ne-ensuite. Ezinye izinto yimigangatho yomthi oqinileyo, iimpompo ezi-2 zobushushu ezine-A/C, iwasha yokomisa, idesika yabo bafuna ukubaleka emsebenzini, igaraji encanyathiselwe kabini kunye nendawo yokupaka eyaneleyo.
Sinokulala ngokulula ukuya kwiindwendwe ze-14 ezinomoya womoya kumagumbi okulala ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na indawo eqhelekileyo, oko kukuthi, igumbi lokuhlala, igumbi lelanga, njl. Ukuba ufuna ukusebenzisa ezo ndawo eziqhelekileyo, ngokuqinisekileyo, sinokulala ngakumbi.
Sikwanazo ii-RV ezi-2 ezisebenza ngokupheleleyo kwipropathi ekhoyo ukuba irente, kodwa KUPHELA kwiindwendwe zethu ezirenta iLavender Manor. Sifuna ukugcina ubumfihlo kunye nolonwabo lweendwendwe zethu, kodwa lukhetho ukuba iindwendwe zethu zinabantu abongezelelweyo ezifuna ukubamema.
Songeze itafile entle eyenziwe yasekhaya enokuhlala i-12! Ngekhitshi elinombono ovulekileyo, igumbi lokutyela kunye negumbi lelanga, sinokuhlala ngokulula abantu abangama-20 ngoku! Ifanelekile kwizidlo ezincinci, iintlanganiso, njl. kunye nokukhetha kwezinye iindwendwe ukuhlala ubusuku xa zifunwa. Qhagamshelana nathi ngamaxabiso ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
ISaint Edouard-de-Kent yindawo entle yokuloba, edibana neBouctouche, kwiNB's Acadian Coastal Drive, edume ngeendawo zayo ezintle kunye neelwandle ezinesanti ezinamanzi ashushu emantla eCarolinas! Zizonwabisa ngokutya kwaselwandle okutsha kunye nobugcisa kunye nenkcubeko kule ndawo. Indlu ijonge kwiFama yokuqala yeLavender ye-NB enemibono yeNorthumberland Strait. Yiza nentonga yakho yokuloba & ubambe i-mackeral entsha kanye e-wharf; yomba iimbaze ngaselunxwemeni; yonwabele imisebenzi yasemanzini efana nokuqubha, ukukhwela isikhephe okanye ukusefa emoyeni; yonwabela ibhayisekile emangalisayo kunye neetrayile zemoto ekhephu kunye nemibono enomtsalane; okanye uhlale phantsi, uphumle kwaye uphumle.
U-Lori, uPaul & Carly bayakuvuyela ukwamkela iindwendwe kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zihlangatyezwa ububele baseMaritime. Sihlala kufutshane & siya kudibana neendwendwe zethu ukubanceda ukuba bazinze. Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zethu kodwa siya kufumaneka ngayo nayiphi na imiba enokuthi iphakame okanye nayiphi na imibuzo iindwendwe zethu ezinokuba nayo. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukulungiselela naziphi na izicelo ezizodwa okanye iimfuno ezinokuthi iindwendwe zethu zibe nazo. Vele ubuze! :)
U-Lori, uPaul & Carly bayakuvuyela ukwamkela iindwendwe kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zihlangatyezwa ububele baseMaritime. Sihlala kufutshane & siya kudibana ne…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Édouard-de-Kent